Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Lock ကျသွားတဲ့ Facebook Account ကို ပြန်လည် ရယူဖို့ Trusted Contacts များကို အသုံးပြုနည်း ♫
♪ Lock ကျသွားတဲ့ Facebook Account ကို ပြန်လည် ရယူဖို့ Trusted Contacts များကို အသုံးပြုနည်း ♫
Facebook က သင့်ရဲ့ အကောင့်ကို ပိုမိုလုံခြုံစေဖို့ Trusted Contacts ဆိုတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အဲဒီ စွမ်းဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုရင် Password မေ့လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Hack ခံရလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ သင့်အကောင့်ကို ပြန်လည် ရယူ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Trusted Contacts များကို သတ်မှတ်ခြင်း။
Trusted Contacts ကို အသုံးပြုဖို့ သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ထဲသို့ Log In ၀င်ပါ။ Account Settings ထဲကတဆင့် Security ကဏ္ဍကို သွားပါ။ ဘယ်ဘက် Sidebar မှ Trusted Contacts ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ညာဘက်မှ Choose Trusted Contacts ကို နှိပ်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ Trusted Contacts စွမ်းဆောင်ချက်က သင့်ကို ဘယ်လို ကူညီပေးနိုင်လဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးမှာပါ။ Choose Trusted Contacts ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
အနည်းဆုံး သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ကနေ အများဆုံး ငါးယောက်အထိ Trusted Contacts အဖြစ် သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ နာမည်တွေကို တစ်ခုချင်းစီ ရိုက်ထည့်ပြီး သူငယ်ချင်း List ကျလာရင် အဲဒီထဲက သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်ပါ။ သူငယ်ချင်းများ ရွေးချယ်ပြီးရင် Confirm ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ သင့်ရဲ့ Password ကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ဒါကတော့ သင့်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် Facebook က စစ်ဆေး အတည်ပြုတာပါ။
Trusted Contacts များကို ရွေးချယ်ရာမှာ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုသာ Trusted Contact အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။ နောက်ပြီး Facebook ကို အမြဲ အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုသာ ရွေးချယ်သင့်သလို Facebook မှာ သိကျွမ်းတဲ့ သူငယ်ချင်း မဟုတ်ဘဲ အပြင်မှာပါ ခင်မင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
သင့်အကောင့်ကို ပြန်လည် ရယူခြင်း။
သင့်ရဲ့ အကောင့် Lock ကျရင် ဒါမှမဟုတ် ခိုးယူခံရရင် Trusted Contacts ကို အသုံးပြုပြီး သင့်အကောင့်ကို ပြန်လည် ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ Facebook Login Screen မှာ Forgotten your password? လင့်ကို နှိပ်ပြီး သင့်ရဲ့ Username, Email Address ကို ထည့်ပေးပြီး Search ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်အဆင့်မှာ No longer have access to these? ကို နှိပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ Trusted Contacts များကို https://www.facebook.com/recover သို့သွားခိုင်းပါ။ အဲဒီ စာမျက်နှာကနေ သင့်သူငယ်ချင်းများကို ကုဒ်တစ်ခုစီ ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်က အဲဒီကုဒ်တွေကို သူတို့ဆီက ပြန်လည် ရယူပြီး Enter code box မှာ တစ်ခုချင်းစီ ထည့်ပေးပါ။ Continue ကို နှိပ်ပါ။
နောက်အဆင့်မှာတော့ သင့်ရဲ့ Password ကို Reset လုပ်လို့ ရပါပြီ။ Password အသစ်တစ်ခု ထည့်ပေးပြီး Continue ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ Lock ကျနေတဲ့ သို့မဟုတ် ခိုးယူခံထားရတဲ့ သင့်အကောင့်ကို ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: Facebook ဆိုင်​ရာ , နည်းလမ်းများ
▼ September ( 447 )
Mi Max ကို Unlock မလုပ်ပဲ Root နဲ့ မြန်မာစာသွင်းနည...
♪ Sing! Karaoke by Smule v3.9.7 (Latest Version) &...
♪ Google Play Store Error တတ်နေသည့် (သို့) Google ...
✿ Hardware ပိုင်းလေ့လာလိုသူများအတွက်-CPU Socket မ...
✿ Xiaomi တွေမြန်မာဖောင့် One Click Tool ✿
✿ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ပန်းချီးပုံရေးဆွဲ လေ့လာနိုင်...
✿ ဖုန်းလာကိုင်သူကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ့် App ✿
✿ ရှမ်းကိုးမီး မြန်မာဂိမ်း ✿
✿ Bluetooth ကိုအသုံးပြုပြီး Messages တွေကို Offlin...
✿ Smule မှာ ဆိုထားတဲ့သီချင်းကို ပြန်ဒေါင်းနည်း ✿
✿ ကိုယ့်ချစ်သူ ဘာလုပ်နေလဲသိချင်ရင် Live ကြည့်နိုင်...
✿ ချဲလ်ဆီး ၊ အာဆင်နယ် ၊ မန်ယူ ၊ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် ကီး...
✿ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်က ဗီဒီယို တွေကို အမြန်ဆန်ဆုံး ဒေါင်းယူ...
✿ ဗီဒီယိုကို Live Wallpaper အဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မည်...
✿ Clash of Clans v8.332.16 Apk ✿
✿ မိမိကောင်မလေးရဲ့ ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေ မိမိဖုန်...
✿ ဖုန်းတွက် ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပီးအကောင်းဆုံးပြုပြင်နိ...
✿ Messenger v89.0.0.15.69 Apk ✿
✿ Facebook v96.0.0.10.70 Beta ✿
✿ အမျိုးသမီးများတွက် Gym ကစားနည်းတွေကို လေ့လာနိုင်...
✿ အမျိုးသားများတွက် Gym ကစားနည်းတွေကို လေ့လာနိုင်ေ...